IT-Uchwepheshe kubhekwa omunye ethandwa kakhulu kuze kube manje, kokubili eRussia futhi kwamanye amazwe. Ikakhulukazi wayezazisa abasebenzi abathintekayo ekudalweni software. Manje kukhona neze yimuphi izinhlangano ukuthi akudingeki izinhlelo yesimanje umsebenzi.
Abasebenzi ongaqhuba noma ndawonye noma ngokwehlukana. Demand ngabo lihlotshaniswa ukuthuthukiswa computer nobuchwepheshe, ezisetshenziswa kuyo yonke imikhakha yokuphila komuntu. Uma unesithakazelo kulokho umholo wabo, IT-chwepheshe kuyinto isikhundla ikhokhwe. Kodwa inani ingase yehluke kuye ngesistimu iphrofayli.
Kuze kube manje, kukhona izigaba ezimbili lezi zisebenzi:
Isicelo: umsebenzi owawenziwa ngayo izicelo ngomumo;
uhlelo: ukudala i-software yakho siqu.
uhlobo lokuqala ochwepheshe nethuba ekukhuleni umsebenzi, njengoba bengeke bakwazi ufunde ukuthi ungadala ukwakha ngeyabo imali. ochwepheshe System ngokuvamile abanezikhundla ebalulekile majors. Kuyini komholo IT-onguchwepheshe? Kuyinto ruble 70 000, kodwa inani ethize incike uhlobo isikhundla.
Uma anentshisekelo iholo ethize, IT-onguchwepheshe 1c uthola ruble mayelana 60 000. Abasebenzi, ukudala izicelo C ++ kukhona zabasebenzi ayizinkulungwane 60-80. Ruble. Java program uthole ama-ruble ayizigidi 120-200, kanye PHP isisebenzi -. Ruble ayizigidi 30-100 ..
Lezi idatha kuhlanganisa kumasayithi athandwayo emisebenzi. Kodwa iholo IT-Uchwepheshe kuxhomeke ezicini eziningi ezahlukene. Ngakho, sicabangisisa ngazo zonke iziphakamiso, ungabona umsebenzi yizinkokhelo nesizotha more. Ngokwesibonelo, uma awudingi amakhono amaningi isipiliyoni, kusikiselwa ukuthi iholo 10 000 kuya ku-20 000 ruble.
Yini kuthinta amaholo?
Ubukhulu iholo, okuyinto IT-chwepheshe, eMoscow ungumholi ukuthi ngokwejwayelekileyo akumangazi. Kwezinye izifunda, inani imali Kuthi ezincane.
engenayo Ngini ochwepheshe abasebenza ezinkampanini phezulu, isibonelo, i-Apple, i-Google, i-Facebook. Lokhu kusebenza futhi onjiniyela third-party, ngokuzimela ukusebenzisa lo msebenzi. Ngokwesibonelo, uPavel Durov, ngubani kubhekwa umsunguli inethiwekhi "VKontakte", ingenye yezindawo ezicebe kakhulu onjiniyela Russian.
By the way, emkhakheni wathi ngokuvamile ukusebenza namakhasimende ngaphandle labalamuli inzuzo engaphezu kuka-imisebenti lesimeme. IT-Uchwepheshe ingasebenza ukude.
Uyini iholo, IT-Uchwepheshe ungafunda, futhi esekelwe yakhe nakho. Kufika ku-inkampani futhi uthathe, kodwa umholo wokuqala kuyoba encane. A uhlelo osesebenze emkhakheni software iminyaka engaphezu kuka-3, ungakwazi ukuthola isikhundla esiphakeme. Kodwa ngesikhathi esifanayo kubalulekile njalo ukwandisa ulwazi lwabo, isibonelo, ukuthatha ikhompyutha izifundo.
Salary kuncike esifundeni
ERussia, program alabo abahola ngaphansi kuka US naseYurophu. Kodwa sibonga ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bama-computer, onguchwepheshe enjalo, ungakwazi usebenze ukusuka noma kuphi emhlabeni. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze ufunde ukuthi ukwaba isikhathi siqu.
A emadolobheni amancane Russian akukona ukusebenza nezinkampani yelwati. Futhi kukhona ochwepheshe e imisebenzi bengase bafune khona ukuba enze nokwenza kahle ACS nokusetha 1c.
Yini kunakwe lapho befaka isicelo somsebenzi
umsebenzi IT-Uchwepheshe zithandwa kuleli zwe. Ngokuba ukulungiswa idivayisi kumele kube qhuba abanekhono. Uma une amakhono kanye nesipiliyoni ukuthi, njengoba sekuphawuliwe kakade, ungakwazi ufanelekele esiphakeme. Lapho abaqashi idivayisi uhlole indlela yokunquma elandelayo:
Ezemfundo Level - zenani akuphelele semfundo ephakeme, noma kukhona abasebenzi abaningi self-wafundisa.
Experience - uma kukhona okungenani iminyaka engu-3, umsebenzi onjalo ubhekwa okuthembekile.
Ubudala - kule okukhethekile uncamela abasebenzi abasha ngoba bakhuthele futhi okunenjongo.
Amandla ukusebenza kolayini abaningana - salokhu isisebenzi kumele abe nolwazi ezimbonini eziningana.
Ukubambisana - IT-Uchwepheshe baxhumana abanye ukuze bafeze imigomo abanayo lezisebenzi.
olunye ulimi - IsiZulu luncanyelwa.
Learner - umsebenzi kufanele uzilungiselele njalo ngcono, isibonelo, ukuthatha izifundo IT ochwepheshe.
Amakhono wadala izinhlelo.
Ikhono ukusebenza izinhlelo zezimali.
Ingabe njalo izibuyekezo zesofthiwe nezinhlelo zokusebenza, ngakho isisebenzi kufanele kube yisikhathi sokuba sizihlole. Ngesisekelo nalezi zindlela, isinqumo ukuqasha. Lo chwepheshe kumele kube esebenzayo, abanekhono futhi ikukhonzile.
Ukuze ngempumelelo isicelo somsebenzi, umfakisicelo kufanele uhambisane nezinye izidingo eziningi saziso:
ukutholakala kwemibhalo edingekayo.
Izinkampani eziningi ukunikeza umsebenzi ohlelekile, ukuze isisebenzi ikhokhwe iminikelo Pension Fund. Ulwa kungase aqukethe iholo futhi inzalo oda kuphelile, kepha zikhona nezinye izinhlelo zokukhokha.
I izinhlobo zomsebenzi
Ngo izinkampani yesimanje wavula izikhala elandelayo:
Inqolobane yokuqukethwe. Abazibophezele okuqukethwe amasayithi kanye nomsebenzi namaqembu e amanethiwekhi omphakathi.
Umphathi wephrojekthi. Udinga ekusebenzeni avumelanayo DTP, nabaqambi bamawebhu, copywriters.
Isicelo Abadali. Zakha Uhlelo zamadivayisi eselula.
Uchwepheshe inethiwekhi ubuchwepheshe. Isebenza ukusebenza amakhompyutha inethiwekhi.
Uchwepheshe technical support okuyinto ukuzixazulula izinkinga ezihlukahlukene ne inqubo.
Kwezamabhizinisi. Acutshungulwe idatha, ukudala emisebenzi zohlelo.
Yini isisebenzi uzokhokhelwa, encike kuyo. Kulesi umsebenzi zingeqedwe, nzima ukufeza. Le ndawo njalo ngcono, futhi esikhathini esizayo kuzobalwa kuphela ukhule njengoba ingxenye IT-ubuchwepheshe babé yokuphila komuntu. Kodwa ngcono kubo uyohlale zidinga kwabasebenzi abaningi.
Ilokhu nokukhulisa izethameli abasebenzisi Internet. Cishe zonke inkampani has portal lalo. Ukuze nokwandisa ukusebenza kwabo futhi kudingeka Konjiniyela.
Wokuqashwa Ochwepheshe abasha
Isibalo iziqu ama-diploma program, nabaqambi ewebhu kanye uhlelo abaphathi njalo ziyanda. Kodwa zonke umqashi efuna ukuthola umsebenzi abanolwazi okunokwethenjelwa ongenza imisebenzi ehlukene. Futhi indlela ukuze uthole isipiliyoni ekuqaleni uMklami?
Kungcono ukufunda amakhono abawadingayo kakade kusukela Yiqiniso 1st. Prakthiza self-ucwaningo kubaluleke kakhulu. umsebenzi okunjalo kuyoba baziswa ngaphezulu. Ukuze Ochwepheshe kulo mkhakha babe nokuqeqeshwa professional, okuvumela ukuba uthuthukise amakhono. Ungaphinde uye ku olunye ulimi izifundo kanye emakilasini esizeni.
Izinzuzo zihlanganisa yemisebenzi ukuthi ungafunda ngasiphi yobudala, kuhlanganise nendlu. Ukuze wenze lokhu, kukhona izifundo eziningi namabhukwana, zikhona izikhungo eziningi zokufundisa nokuqeqesha kwabo ongoti. Umkhuba ayathola ngokuzimela.
A professional angahlala akuthola umsebenzi uqobo, isibonelo, ngosizo freelancing. Kulokhu, kubalulekile ukuba bachithe isikhathi siqu. Yemali engenayo izophinda ancike kuye kuphela.
Umsebenzi ikuvumela ukuba njalo ziphenduke, ukuhlangana nabantu ezithakazelisayo. Ungathola kokubili eRussia nakwamanye amazwe. Le ndawo endaweni esizayo, ngakho kukhona umsebenzi ochwepheshe ngaso sonke isikhathi.
Kodwa ngaphezu izinzuzo ochwepheshe anjalo, zikhona nobunzima, kodwa pluses nakakhulu. Ikakhulukazi ngoba konke kuncike ukuzimisela komuntu. Uma ikwazi ukulahla isikhathi sakhe, yena abe ngaphansi kwamandla izinkinga.
Libhekisela yinkimbinkimbi isidingo isikhathi eside emsebenzini. Ngokuvamile, i-oda enkulu umsebenzi kufanele enze esikhathini esifushane. It akusebenzi njalo, futhi yokuthola ulimi olulodwa nge iklayenti, yingakho Uchwepheshe wenza umsebenzi wakhe ezithakazelisayo.
Kubalulekile ukuba aqeqeshe zezibalo ithuba kwengqondo futhi zikhule kule mkhakha, wonke kumelwe baphume.